Jiilka hadda soo baxaya waxay falgal la sameynayaan aqriska iyo qorista buugaagta . Meelaha uu sida xowliga ah uu qoraalka uga hano qaaday waxaa ka mid ah Magaalada Muqdisho iyo qeybo ka mid ah gobollada...
Waddada isku xirta Isgoysyada Dabka Iyo Bakaaraha ayaa burburtay isla markaana aan jirin xilligan wax gaadiid ah oo Isticmaalaya, waxaana rajo ka qabay shacabka oo dhowr bilood ka hor loo sheegay in la dhisayo. Shacabka...
Cali Sheekh Maxamed Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan golaha Shacabka ayaa sheegay in uu yahay musharrax u taagan qabashada xilka guddoomiyaha golaha Shacabka. Cali Sheekh Maxamed Nuur oo ka hadlaya musharraxnimadiisa waxaa uu yiri....
Doodu kama taagna muhimada weyn oo dal sida Soomaaliya ka soo kabanaya dagaalo sokeeye ay u leedahay deganaasho siyaasadeed oo suura gilisay in waddan dib loo dhiso. Deganaasho siyaasadeed la’aanteedna umadi ma gaari karto horumarka...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Xafiiskiisa Wasaaradda Gaashaandhigga kaga guddoomay warqadaha danjiranimo Safiirka Dalka Qatar ee loo soo Magacabay Soomaaliya Mudane Xasan Xamsa Asad. Danjire Xamsa ayaa Madaxweyne Farmaajo u gudbiyay...
Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta wareegto uu soo saaray xilal ugu magacaabay Shan Mas’uul. Xubnahan ayaa loo kala magacaabay guddoomiye gobol, Bankiga Dhexe, wasaaradda qorsheynta iyo la taliye. Wareegtada ayaa sidan u...
Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada B/weyne ayaa ka dalbaday maamulka gobolka Hiiraan in si degdeg ah wax looga qabto burburka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Waxay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay...
Maanta oo Sabti ah, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah waxay ula wareegtay ciidankii uu magaalada Muqdisho ku tababaray Imaaraadka Carabta, agabkooda iyo sidoo kale xeradii ay ku tababaranayeen ee Jeneraal Gordon. Munaasabad ay...
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo maanta ugu ambo-baxay dalka Imaaraadka Carabta booqasho 4 maalmood ayaa inta aanu dhoofin saxaafadda la wadaagay ujeedka safarkiisa. Madaxweyne Gaas oo arrinkaas ka hadlaya waxaa uu yiri “Waxaan maanta u...
Guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigay Magacyada xubnaha guddiga qaban qaabada doorashada ee guddoomiyaha golahan, iyadoo xildhibaannada golaha shacabkana ay ka doodayaan xubnaha guddigan. Xubnahan ayaa ka kooban 15, waxaana dood...